Posted by Tranquillus | Jul 5, 2018 | Tababarka internetka
Emails ayaa hadda ah qayb ka mid ah qaabkayaga isgaarsiinta, shakhsiyan iyo xirfad ahaan labadaba. Waxay si dhakhso ah u qorayaan una soo diraan, isla markiiba waxay gaadhaan qofka qaataha leh. Sida fariin caadi ah, waxay u hoggaansamaan sharciyo si ay ixtiraamaan, waana taas barnaamijka iBellule wuxuu soo jeedinayaa in uu ku baro, adigoo u mahadnaqaya tababarka gaaban ee guud ahaan soconaya sadex saacadood. Habka, saxda ah oo la taaban karo, ayaa ku baraya inaad qorayso emails wax ku ool ah oo aan lahayn halis ah oo keenaya dhacdooyin diblomaasiyadeed.
Qeybta iBellule waxaa abuuray kooxda Mashruuca Voltaire, adeegga qorista ee hingaadinta internetka. Goobta mashruuca Voltaire iyo codsashadu waxay u oggolaaneysaa qof kasta in uu ka shaqeeyo xawaarahiisa si uu dib ugu noqodo raadinta ama hagaajiyo higgaadkooda, naxwaha iyo qoraalka.
Isagoo xusay in dhibaatooyinka qoraallada qoraagu aysan ka imanin keliya khaladaadka la xidhiidha si xun u isticmaalka luqadda Faransiiska, laakiin sidoo kale dhibaato ka timid fahamka dhismaha qaab-dhismeedka emailka, Projet Voltaire wuxuu rabay inuu nadiifiyo tabobarkiisa oo uu go'aansaday abuuraan waxbarasho si gaar ah loogu qoondeeyay qorista waraaqaha.
Si loo qoro email xirfad leh, waa in aan hore u fahannaa arrimaha diblomaasiyadeed iyo farsamooyinka: waa in aan ka jawaabnaa, jawaabaha oo dhan, sanduuqa sanduuqa waa in la diiwaangeliyaa dadka qaata sida ay tahay inay u muuqdaan ama aysan is dhejin, sida loo buuxiyo si wax ku ool ah sheyga sanduuqa ... Ka dibna waxa loola jeedaa mawduucyada iyo xulashada odhaahyada aaminka ah waa mid aad muhiim u ah. Ugu dambeyntiina, waa in habka loo habeeyo, sababtoo ah waa ka duwan tahay wadahadalka telefoonka ama fool-ka-foolka, ma haysid jawaab celin jir ahaaneed, qoraalkuna wuxuu macne ahaan u qaadan karaa lid ku ah himiladiisa tan iyo dabcan ma jiraan wax su'aal ah oo la adeegsanayo smileys si ay u taageeraan ujeedooyinkaada email xirfad leh.
Waa in laga jawaabo su'aalahan oo dhan in madal iBellule ku dhashay, hababka ugu fiican eeemail halku-dheggiisu waa ” Si loo suurtageliyo shaqaale kasta inuu qoro email-yo wax ku ool ah kaas oo lagu farxi doono macaamiisha iyo kooxaha ".
Xaqiiqdii, haddii aad u ogolaan karto qiyaasta qaababkaaga iyo khaladaadka yar ee dadka u soo diraya emailadaada shakhsi ahaaneed, ma aha mid la mid ah waraaqaha xirfadlaha ah ee cawaaqibkoodu u keeni karo isgaarsiintaada iyo sidaas awgeed isdhaafsigaaga ganacsi.
Mawduucyada ay ka kooban yihiin tababarka iBellule
Tababarku wuxuu leeyahay toddoba ujeedo:
Aqoon yaa nuqulaya
Xulo habka barashada saxda ah
Isticmaal hab fudud oo si fudud loo fahmi karo
Ogow sida loo dhammeeyo oo u salaamo habboon
Qalabaynta miisaan iyo hufnaan anshax
Ogow qaababka 8 inay mamnuucaan
Jawaab u dir e-mailka ku qanacsanaanta
Barnaamijku wuxuu u qaybsan yahay afar heer:
1 - Waxaan helaa email
Maxaad samaynaysaa markaad hesho email? Ma lagama-maarmaan ah in laga jawaabo waana in aan ka jawaabnaa dhammaan, miyaad ku wareejin kartaa ...
2 - Ardayda, Mawduuca, iyo ku lifaaqan
Waxay ku saabsan tahay fahamka mawduuc walba. Waa aasaas u ah in uu si fiican u shaqeeyo hawl kasta, sababtoo ah inta badan waa heerkani in dhacdooyinka diblumaasiyadeed la qalajiyo.
3 - Waxyaabaha ku jira boostada
Emails waa in ay ahaato mid kooban oo wax ku ool ah. Qaababka nuxurka ah ee bilowga iyo dhammaadka waa in loo qaabeeyaa qofkaad wada hadlaysaan, codkuna ma aha mid la mid ah boostada boostada. Fikradaha waa inay ahaadaan kuwo cad oo isla markiiba la fahmo, waa in luuqad habboon loo adeegsadaa.
Bandhigu waa muhiim sidoo kale waaxdani waxay sidoo kale wax ka qabataa khaladaadka aan la sameynin.
4 - Jawaabta email-ka ee cabashada ama qanacsanaanta
Ganacsi walbaa waa la dhimi karaa waxaana laftiisa u muujiyaa dareenka macaamiishiisa. Dibloome waxay lagama maarmaan u tahay shirkad si ay u ilaaliso sumcad fiican iyo, haddii ay dhacdo waraaqo cabasho ah, shan dhibcood oo muhiim ah waa in wax laga qabtaa.
Shirkad magaceeda oo xumaatay ayaa ka xumaata qaladaadkeeda iyada oo si habboon u maareyneysa dib-u-eegista macaamiisha aan faraxsanayn, waxay ka soo horjeeda sumcadda wanaagsan si ay u ogaato sida loogu adeego macaamiisheeda adeegga iibka ka dambeeya.
Muddada iyo koorsada tababarka
Waxay qaadaneysaa qiyaastii seddex saacadood isku dhafida guud si loo daboolo tababarka oo dhan. Waxaad bedeli doontaa tababarka shakhsi ahaaneed iyo dib-u-eegista dhibcooyinka jilicsan. Xidhiidhku waa mid aad u fiican oo muuqaalkiisa kombiyuutarkiisa la fahmi karo marka hore la eego. Tabobarkan wuxuu u furan yahay faa'iidada internetka iyo dadka aan aqoonin tiknoolijiyadaan.
Si loo qiyaaso waxqabadkaaga, waxaad haysataa fursad aad ku qaadato imtixaanada cad, qorsheynta qiimeynta heerkaaga bilowga ah iyo caddaynta heerka aqoontaada.
Muxuu qoraaga iBellule leeyahay?
Habka iBellule waxaa lagu sameeyey Sylvie Azoulay-Bismuth, khabiir u ah qoraallada qoran ee shirkadda, qoraaga buugga "Ku noqo taageerada e-mailka".
Waxay ka hadlaysaa emails sida "qalab la siiyay iyada oo aan talooyin" waxayna dooneysaa in ay dayactirto kormeerkan. Waxay ujeeddadeeda u qaabaysay si ay kuu oggolaato inaad u qorto warqadaha emailka ah oo si wanaagsan loo dhisay iyo si macquul ah, si aad u qaadato qof walba oo aad rabto. Qoraalku wuxuu u doodaa inuu ka fogaado jariidadda farsamo, si uu u noqdo mid kooban iyo mid wanaagsan.
Sylvie Azoulay-Bismuth sidoo kale waxay xiiseyneysaa sida aan u shaqeyno. Markaad ku qorto emailkaaga, waxay la socotaa garabka bidix ee maskaxdaada iyo haddii aad si dhaqso ah u akhri, markasta waa marxaladan oo loo isticmaalo. Waa inaad sameysid nasasho, xitaa wakhti aad u yar, si aad u oggolaato in macluumaadka ay u wareegaan halbeeg dhexdiisa mid kale oo markaa dib loo eego qaybta saxda ah ee ku habboon aragti caalami ah oo ku siinaya aragti dheeraad ah xukumi tayada qoraalkaaga.
Barta ugu dambeysa ee ay ku adkaysato waa baahida loo qabo in la xoojiyo oo akhriyo oo loo qoro emaylkeeda wakhti go'an ama ugu yaraan laba hawlood si aanay u kala firdhin iyada oo la gooyey warqad kasta oo cusub oo yimaada.
Xasuusta xasuusta Woonoz
Tababbarka iBellule wuxuu ku salaysan yahay farsamada qalabka xasuusta, taas oo ku salaysan aqoonta sayniska ee hababka lagu xalliyo xasuusta si loo kordhiyo heerka xajinta.
Qof kastaa wuxuu leeyahay qaabkiisa gaarka ah xafidi adigoo isticmaalaya habab kala duwan. Marka la isku daro farsamooyinka qalabka xasuusta leh ee sirta farsamada, Woonoz wuxuu soo saaray hab aad u wanaagsan oo shakhsi ahaaneed kaas oo tixgelinaya qiyamka shakhsi ahaaneed ee qof kasta.
Woonoz waa shirkad farsamo oo cusub oo lagu abuuray 2013 kaas oo la siiyay calaamadda "Faransiiska Tech Pass Pass", taas oo sannad walba abaalmarin u leh boqol shirkadood oo ku jira maadada 'hypercroissance', oo ah qodobbada "French Tech".
Xalka xasuusta-xaaraan ah - oo la siiyay waqtiyo badan - wuxuu leeyahay himilada kama dambaysta ah ee lagu hubinayo xasuusta degdegga, joogtada ah iyo xasuusta xogta la rabo ee adeegga natiijada tababarka. "Waa la tijaabi karaa, la xaqiijin karo, lana caddeyn karaa".
Woonoz waxay u adeegsataa ogaanshaha nuroscience iyo aqoonta nidaamyada xakameynaya xasuusta inay hoos u dhigto heerka cabsida 80% ee macluumaadka la bixiyay inta lagu jiro tababarka la illoobo toddoba cisho gudahood.
Habka Woonoz wuxuu kor u qaadaa saameynta barashada isagoo la qabsanaya heerka aqooneed ee tababarka, habka uu ku xasuusiyo macluumaadka iyo heerka uu helayo. Tababarku waxay ku habboontahay waqtiga dhabta ah oo wax ka taraya marnaba xasuusin.
Waa sirta farsameed ee loo adeegsado barashada iBellule module kaas oo daweynaya heerarka loo adeegsanayo tababarka iyada oo la adeegsanayo algorithm aad u xooggan oo loo isticmaalo oo la isku daro. Tababarku wuxuu ka kooban yahay barnaamijka udubdhexaadka iyo soo jeedinta xaaladaha. Sirdoonka dabiiciga ahi wuxuu garsoorayaasha ku doortaa fikrado nololeed oo aan la helin oo ay sare u qaadaan barnaamijka si loo helo xasuus wanaagsan.
Heerarka Tababarada IBellule
Mashruuca iBellule wuxuu tababar u fidiyaa shakhsiyaadka qiimaha 19,90 €. Waa inaad buuxisid wareysi kooban oo ku saabsan faahfaahintaada boggooda.
Feejignaanta, lacag bixinta waxaa lagu sameeyaa jeeg ama PayPal, laakiin laguma heli karo kaarka deynta.
Wixii ganacsi ama dugsi, waa inaad buuxisid su'aalaha iyo mishiinka ayaa kula soo xidhiidhi doona si ay kuugu dejiyaan qiyaasta iyadoo la eegayo xajmiga dugsigaaga ama ganacsigaaga.
Wixii daraasad qoto dheer oo ku saabsan mawduuca, waxaad ka heli kartaa buugga Sylvie Azoulay-Bismuth oo ka wada shaqeynaya mawduuca tababarka iBellule: "Ku noqo taageerada e-mailka", waxaa laga heli karaa Amazon laga bilaabo 15,99 € (marka laga reebo bixinta).
Si aad u hubiso in adiga iyo shaqaalihiinnaba aysan khaladaad kuugu sameynin mararka qaarkood cillado halis ah oo si fudud u hagaajinayaan qoraalka e-waraaqahaaga ganacsigaaga si aad u hesho wax ku oolnimada, tababarka iBellule waa qalab awood leh, oo abuuray mahadsanid fikradda cusub iyo kobcinta maaddooyinka uu soo saaray khabiir ku takhasusay buugan sare ee suugaanta e-boostada. Qiyaastii seddex saacadood, tababarka iBellule wuxuu bixiyaa fursad uu wax ku barto oo gaar ahaan in la xajisto qaybaha xubin kasta oo ka mid ah shirkadda ay awood u yeelan doonto in ay maalin kasta dalbato. Tababarka iBellule waa maalgashadeeda oo ay tahay mid deg deg ah iyo maalinba.
Soo bandhigida barnaamijka tababarka internetka iBellule May 13th, 2020Tranquillus
horeFuran khadka taleefanka oo waxaad ka heleysaa bixiyaha adeegga internetka ee Faransiiska